उत्कृष्ट फिगरका लागि : नि’तम्बको श’ल्यक्रिया,गराउदा मोडलको मृ’त्यु – Ujyaalo Patrika
उत्कृष्ट फिगरका लागि : नि’तम्बको श’ल्यक्रिया,गराउदा मोडलको मृ’त्यु
धेरै मानिसहरु आफ्नो सुन्दरता बढाउनका लागि शरीरका केही हिस्साको प्लास्टिक सर्जरी गराउँछन् तर कहिलेकाँही प्लाष्टिक सर्जरीको नकारात्मक असर पर्नसक्छ र अनुहार पहिले पनि भद्दा र खराब देखिन सक्छ । यद्यपि, मेक्सिकोकी एक इन्स्टाग्राम मोडलको प्लाष्टिक सर्जरी यति खराब भयो कि उनको मृ८ त्यु नै भएको छ ।
३० वर्षकी जसलिन क्यानोलाई मेक्सिकोकी किम कार्दासियन पनि भनिन्छ । क्यानो मोडलका साथै एक स्विमसुट डिजाइनर पनि थिइन् । इन्स्टाग्राममा क्यानोका लगभग १३ मिलियन फलोअर्स छन् जो उनको सुन्दर फिगरका प्रशंसक हुन् ।
यो महिनाको सुरुवातमा क्यानो आफ्नो क्यालिफोर्नियास्थित घरबाट कोलम्बियामा प्लास्टिक सर्जरी गराउन गएकी थिइन् । क्यानो आफ्नो नि८ तम्बको श८ ल्यक्रिया गराउने तयारीमा थिइन् । क्यानोले जस्तो श८ल्यक्रिया गराउँदै थिइन् त्यसमा उनको शरीरको एक हिस्साको बोसो निकालेर प्लास्टिक सर्जरी गर्ने स्थानमा लगाइन्छ ।
‘बट लिफ्ट’ भनिने यस्तो खालको श८ ल्यक्रियामा क्यानोको पेटबाट बोसो निकालेर उनको नि८ तम्बमा राखिँदै थियो । अब खबर यस्तो आएको छ कि यो खतरनाक श८ ल्यक्रियामा क्यानोको मृ८ त्यु भएको छ । अनुमानका अनुसार यस्तो प्रकारको शल्यक्रियामा ३ हजार व्यक्तिमध्ये एक बिरामीको मृ८त्यु हुने गर्छ ।
क्यानोको परिवारले आफ्नो तर्फबाट अहिलेसम्म मृ८ त्युबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि गरेका त छैनन् तर उनकी सहयोगी मोडल लिर मार्सरले ट्वीटरमा यसबारे जानकारी दिइन् । मार्सरले लेखिन्, ‘कोलम्बियामा श८ ल्यक्रियाको क्रममा जसलिन क्यानोको मृ८त्यु भयो, यो खतरनाक हो । उनी पहिले देखि नै असाध्यै सुन्दर थिइन् । उनको परिवारका लागि म प्रार्थना गर्छु, उनी निकै प्यारी थिइन् । ’
क्यानोको परिवार र आफन्तले यसबारे आधिकारिक बयान नदिएपनि उनको इन्स्टाग्राम पेज डिसेम्बर ७ देखि अपडेट गरिएको छैन । कथित रुपमा डिसेम्बर ७ मा नै उनको मृ८ त्यु भएको थियो ।
Previous छोरा बुहारीलेनै आमालाई बो, क्सी भन्दै यस्तो सम्म गरेपछी . . .
Next पहिलो पटक शा’री’रि’क स,म्पर्क राख्दा अनिवार्य अपनाउनु पर्ने बिधि ! – के तपाइले यी बिधि अपनाउनु भयो . .